Myanmar agrees to the appointment of H.E. Mr. Maxwell Ranga as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Zimbabwe to the Republic of the Union of Myanmar with residence in New Delhi – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
The Government of the Republic of the Union of Myanmar has agreed to the appointment of H.E. Mr. Maxwell Ranga as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Zimbabwe to the Republic of the Union of Myanmar with residence in New Delhi.
Mr. Maxwell Ranga was born in 1961. He received Diploma in Human Resources Studies in 1996, and MSc. Degree in Human Resources Management in 1998 from the University of Manchester, United Kingdom. From 2001 to 2004, he served as Under Secretary of Human Resources at the Ministry of Justice, Legal and Parliamentary Affairs. Then, he was appointed as Director of Human Resources from 2004 to 2011. He also served as Acting Permanent Secretary at the Ministry of Justice and Legal Affairs from 2012 to July 2014. Since August 2014, he has been serving as Ambassador of the Republic of Zimbabwe to India. He is married with three sons.
Mr. Maxwell Ranga will serve as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Zimbabwe to the Republic of the Union of Myanmar with residence in New Delhi.
ဇင်ဘာဘွေသံအမတ်ကြီး မစ္စတာ မက်ဝဲလ် ရန်ဂါ အား နယူးဒေလီမြို့တွင် အ​ခြေစိုက်သည့် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ အထူး အာဏာကုန်လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော ဇင်ဘာဘွေ နိုင်ငံသံအမတ်ကြီးအဖြစ် ပူးတွဲခန့်အပ်ရန် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရမှ သဘောတူပြီး ဖြစ်ပါသည်။
မစ္စတာ မက်ဝဲလ်ရန်ဂါကို ၁၉၆၁ ခုနှစ်တွင် မွေးဖွားပါသည်။ အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၊ မန်ချက်စတာ တက္ကသိုလ်မှ ၁၉၉၆ခုနှစ်တွင် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် လေ့လာခြင်းဆိုင်ရာ ဒီပလိုမာဘွဲ့ကို လည်းကောင်း၊ ၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် လေ့လာခြင်းဆိုင်ရာ မဟာသိပ္ပံဘွဲ့ ကိုလည်းကောင်း ရရှိခဲ့ပါသည်။ တရားရေး၊ ဥပဒေရေးရာနှင့် လွှတ်တော်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၏ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးမှုဌာနတွင် ၂၀၀၁ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၄ ခုနှစ်အထိ အတွင်းဝန်အဖြစ် လည်းကောင်း၊ ၂၀၀၄ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၁ ခုနှစ်အထိ ညွှန်ကြားရေးမှူးအဖြစ်လည်းကောင်း တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လအထိ တရားရေးနှင့် ဥပဒေရေးရာ ဝန်ကြီးဌာနတွင် ခေတ္တအမြဲတမ်းအတွင်းဝန်အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လမှ ယနေ့အထိ အိန္ဒိယနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဇင်ဘာဘွေသံအမတ်ကြီးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင် နေသူ ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းသည် အိမ်ထောင်သည်တစ်ဦး ဖြစ်ပြီး သား(၃)ဦး ရှိပါသည်။
သံအမတ်ကြီး မစ္စတာ မက်ဝဲလ် ရန်ဂါ သည် နယူးဒေလီမြို့တွင် အ​ခြေစိုက်သည့် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ အထူးအာဏာကုန် လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော ဇင်ဘာဘွေ သံအမတ်ကြီးအဖြစ် ပူးတွဲတာဝန်ထမ်းဆောင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၅ခုနှစ်၊ဇူလိုင်လ ၁၇ ရက်။